Ungaphikelela Kanjani Ekuthengisweni Ngaphandle Kokuvala Ukuhola Kwakho | Martech Zone
Ungaphikelela Kanjani Ekuthengisweni Ngaphandle Kokuvala Ukuhola Kwakho
NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 21, 2022 Samir Sampat
Isikhathi yikho konke ebhizinisini. Kungaba umehluko phakathi kwekhasimende elisha elingase libe khona kanye nokulengiswa.
Akulindelekile ukuthi ufinyelele phambili ekuthengisweni emzamweni wakho wokuqala wekholi. Kungase kuthathe imizamo embalwa njengoba ucwaningo oluthile luphakamisa ingathatha izingcingo ezingafika kweziyi-18 ngaphambi kokuthi ufinyelele ekuholeni ocingweni okokuqala ngqa. Kunjalo, lokhu kuncike ezintweni eziningi eziguquguqukayo nezimo, kodwa isibonelo esisodwa sokuthi kungani kungaba inselele kumabhizinisi ukuthi akwazi inqubo yokuthengisa.
Kulokhu okuthunyelwe, sizofaka yonke into ozodinga ukuyazi mayelana nokwenza amakholi okuthengisa kubaqondisi, futhi okubaluleke kakhulu, ukwenza amakholi okuthengisa aholela ekuguquleni amaklayenti amasha. Nakuba ibhizinisi ngalinye lizoba nesu elihluke kancane lokufinyelela abantu, akhona ngempela amathiphu nezindlela ezingcono kakhulu ezingakusiza wena nebhizinisi lakho nithathe izinqumo ezingcono.
Ngaphambi kokuthi sijule kulokho, ake sibheke ngokushesha isimo sokuthengisa, sibe nsundu phansi ngezinombolo.
Izibalo Zokuthengisa Ngokushesha
Ngokuvumelana ne HubSpot futhi I-Spotio:
U-40% wabo bonke ochwepheshe bezokuthengisa bathi ukuhlola kuyingxenye enzima kakhulu yomsebenzi wabo
Okwamanje, u-3% kuphela wawo wonke amakhasimende athemba abamele ukuthengisa
Ukuthengiswa okungu-80% kudinga okungenani ezinhlanu izingcingo zokulandelela, kuyilapho ama-ejenti angaba ngu-44% eyeka ngemva kokulandelela okukodwa (ingqikithi yezingcingo ezimbili)
Abathengi babika ukuthi kungenzeka bamukele ikholi yokuthengisa uma yenziwe ngesikhathi okwakuvunyelwene ngaso ngaphambilini
Kungathatha abaningi ngangokunokwenzeka 18 izingcingo ukuze uxhumane nomuntu ongase abe iklayenti
Icala lokuthengisa libiza abaholayo lingadida. Kodwa-ke, kuyasiza ukuqonda ukuthi izinto zimi kuphi ukuze wazi ukuthi ungaqhubekela kanjani phambili ukuze uzuze impumelelo yebhizinisi lakho. Futhi ekuphenduleni umbuzo wokuthi ungalinda isikhathi esingakanani phakathi kwezingcingo, uzokwazi ukuthola ibhalansi ethambile yokuphikelela ngaphandle kokucasula amathemba akho okuthengisa.
Kukhona futhi idatha eningi etholakalayo lapho engasiza ukuqondisa isu lakho lokufinyelela, futhi.
Manje, empeleni ake sikhulume ngokufinyelela kwezokuthengisa uqobo nokwenza izingcingo zokuthengisa.
Ukwenza Ucingo Lokuthengisa
Uma wenza ikholi yokuqala yokuthengisa, uzofuna ukulungela ngokugcwele noma yimuphi umphumela ongaba khona ovela kukholi. Lungela nje ukuthi ucingo luphendulwe wumholi wakho futhi ulethe iphimbo lakho njengoba kufanele ushiye umlayezo bese uzama futhi kamuva. Futhi lowo umbuzo wesigidi samadola—kamuva kangakanani?
Wonke umuntu oholayo namakhasimende azohluka, njengoba kuvame ukuba njalo cishe ngayo yonke enye into empilweni. Kodwa-ke, uma wenza ikholi yokuqala yokuthengisa, uzofuna ukwenza isiqiniseko sokuthi usukulungele ukuvula umnyango wobudlelwano obusha kanye nekhasimende elisha elingase libe khona. Ezikhathini eziningi, abamele ukuthengisa bavele bavale, okubangela ukuthi bavalwe ngokushesha ngaphambi kokuba lowo ofonayo azi ukuthi bayathengiswa.
Uma umholi engaphenduli ucingo lwakho okokuqala ngqa, kufanele ushiye ivoyisimeyili ejabulisayo kodwa enemininingwane uma kukhona inketho yokwenza kanjalo. Bameme ukuthi bakushayele futhi enombolweni engcono kakhulu ukuze bakufinyelele noma ubacebise ukuthi ungakujabulela ukukuxhuma ngesikhathi esibasebenzela kangcono kakhulu. Ngale ndlela, unikeza izinketho zakho zokuhola ongakhetha kuzo kanye nomuzwa wokulawula esimweni. Abantu abaningi bazoshintsha isinqumo sabo ngokunikezwa ithuba lokuthola ucingo emuva ngedethi nesikhathi esihleliwe.
Ukulandelelwa Ngokuletha Okulindelekile
Nakuba amaklayenti amaningi elindele impendulo yokuqala embuzweni webhizinisi phakathi kwemizuzu eyi-10 noma ngaphansi, ezimweni eziningi, anikeza ukuguquguquka okwengeziwe uma kuziwa ekuxhumaneni okuqhubekayo nokuxhumana. Ochwepheshe bokuthuthukiswa kwebhizinisi baphakamisa ukuthi kufanele uvumele 48 amahora ngemuva kokuthi ubize umkhokheli ngaphambi kokuthi uphinde ufinyelele kubo. Lokhu kuqinisekisa ukuthi uvumele isikhathi seshejuli yabo ematasa ngaphandle kokuphuma njengokucasulayo noma ngokuphelelwa yithemba. Iphinde inikeze abaholayo isikhathi sakho sokucabangela umkhiqizo noma isevisi yakho nokuthi ingabe into abayifunayo noma abayidingayo.
Ungakwazi futhi ukwazisa amathemba ukuthi angakwazi finyelela kuwe nokuthi bangakwenza lokho ngeziteshi ezimbalwa. Lokhu kubavumela ukuba bakhethe isiteshi abazizwa bekhululekile ngaso futhi cishe kwandise amathuba akho okuthola impendulo. Futhi ngaphandle kokuthi uthintwe ngokuqondile noma ucelwe ukuthi ubuyisele ucingo ngokushesha, ungashayeli umholi ofanayo kabili ngosuku olufanayo. Ivele ishiye ukunambitheka okubi emlonyeni womthofu ngoba imvamisa iphuma njengokuphushayo nokufisayo.
Ibhalansi ejabulisayo, kubonakala sengathi, iphakathi kwamahora angu-24 nama-48 ezingcingo zesibili nezilandelayo zokulandelela. Isibonelo, uma usuvele ushayele umuntu ozobathemba kabili kuleli sonto, ungase uthande ukucabanga ukulinda kuze kube iviki elizayo ukuze uthole omunye umzamo wokushaya ucingo. Kuyisenzo sokulinganisa esibucayi lapha, kunjalo, futhi kufanele ubone ukuthi yini ekusebenzela kangcono wena nebhizinisi lakho. Ngokuthatha uhlu lwendlela ucingo lwakho lokulandelela luhamba kahle ngayo, ungathola umbono ongcono wokuthi yini esebenza kangcono eqenjini lakho.
Yiqiniso, enye indlela yokuqinisekisa ukuthi konke izingcingo zokufinyelela zokuthengisa ziyenziwa (futhi zemukelwe) ngesikhathi wukuvumela omunye umuntu ukuthi aphathele wena nethimba lakho umsebenzi. I-Outsourcing ikunikeza inketho yokuba nethimba lochwepheshe ohlangothini lwakho eliqonda konke okuza nokwenza izingcingo zokuthengisa zokulandelela eziphumelelayo, izingcingo zokusekela, nokunye ukuze ugcine ibhizinisi lakho lisebenza. Uma unquma ukuthi uncamela ukushiyela omunye umuntu ama-callback ngenkathi ugxile kumakhasimende akho, lokho kuzoqinisekisa ukuthi yonke ikholi ibuyiselwa ngesikhathi esifanele kanye nomphumela omuhle kakhulu ongakhona.
USmith.ai ama-ejenti ashayela wena izingcingo, athuthukisa isivinini sakho sokuhola kanye nabasebenzi abangakuthwali kanzima abadinga ukufinyelela kumakhasimende. Bazophinda bashayele abaholi abaku-inthanethi abagcwalisa amafomu ewebhu, baxhumane nabanikeli ukuze bathole ukuvuselelwa komnikelo, bajahe izinkokhelo zama-invoyisi angakhokhelwa, nokunye okwengeziwe. Bazothumela nama-imeyili okulandelela nemibhalo ngemva kwekholi ngayinye ukuze baqinisekise ukuthi uxhumo luyenziwa.
Landela ngokushesha uma USmith.ai ama-virtual agents asebenza njengethimba lakho lokufinyelela:
Funda kabanzi mayelana no Smith.ai
Tags: aiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaindawoukufinyelelaikholi yokuthengisaizibalo zekholi yokuthengisaizibalo zekholi yokuthengisaukulandelela ukuthengisaukufinyelela ekuthengisenismith.aiindawoamakholi we-virtualumsizi we-virtual ophumayoumsizi wezwi
U-Samir Sampat uyi-Marketing and Events ehambisana nayo USmith.ai. AbakwaSmith.ai abangu-24/7 abamukela ngezandla ezimhlophe nabasebenzeli bengxoxo bukhoma bathwebula futhi baguqule umkhondo ngocingo, ingxoxo yewebhusayithi, imibhalo, ne-Facebook. Ungakwazi ukulandela i-Smith.ai ku-Twitter, Facebook, LinkedIn, naku-YouTube.
Indlela Elula Kakhulu Yokunciphisa I-Shopify CSS Yakho Eyakhiwe Ngokusebenzisa Okuguquguqukayo Kwe-Liquid
I-Adobe Creative Cloud Express: Izifanekiso Ezinhle Zokuqukethwe Kwemidiya Yomphakathi, Amalogo, nokuningi